I-Darodar Traffic Rocks Kwi-Site Yakho? - I-Semalt Expert Iyazi into enokuyenza
uJulia Vashneva, uSemalt uMphathi oyiNtloko yeMpumelelo yoMThengi, uxela amava akhe ngendlela awayejamelana ngayo ne-Russian spam kuqala.
Abagaxekile baphinde baphinde basebenze, kwaye kufuneka sithathe amanyathelo okuwagxotha. Xa isithuthi se-spam saseRashiya sihlasela i-website yam, ndagqiba ekubeni ndibe ngakumbi kwaye ndothuswa ukubona ukuba umtsha wogaxekile uzama ukuphazamisa idatha yam Google Analytics - dealer extranet vw. Okokuqala, ndakhangela ukuthunyelwa kweendlela ukuze ndiyazi ukuba kutheni i-website yam ifumana iindawo ezininzi ezivela eRashiya. Ndifumene umgwebi ngexesha kwaye ndagqiba ekubeni ndithathe amanyathelo. I-spammer yaseRussia yayivela kwisayithi elandelayo: iforum.topic darodar.com.
Xa ndivula le link kwaye ndilandele iiposenti ezimbalwa, ndafumanisa ukuba abaninzi abagaxekile baxoxa ngeendlela zokonakalisa iiwebhusayithi. Le nqununu yangithumela ekuthengiseni amasayithi afana ne-eBay.com, Amazon.com, kunye ne-Alibaba.com. Andizange ndiqonde ukuba ngubani ogaxekile abazama ukukwenza, kodwa ekugqibeleni, ndazi ukuba bazama ukunyengela ukuze ndizithenge okuthile kwiikhonkco zabo. Emva koko ndavavanya ingxelo yam yekhasi kwaye ndafumanisa ukuba elinye lamaphepha alingenwe kwiwebhusayithi yam. Ndamangaliswa ukwazi ukuba ukuxhunyaniswa kwekhasi elifanayo kwakukho kwiindawo zabo bonke abathengi bam. Nceda uqaphele ukuba uzakufumana eli phepha kwiNgxelo yeSihloko sephepha njengokuba abahlaseli kunye nabakwa-spammers basebenzisa i-URL "/" ukukhohlisa iiprojethi zakho zeendaba zoluntu kunye newebhusayithi.
Abagaxekile bazama ukuthumela idatha efanayo kuzo zonke i-akhawunti yeGoogle Analytics. Ngoku ke kulula ukuba ufumane ikhonkco kwaye uyivimbele kwideshibhodi yakho yeGoogle Analytics. kufuneka i-code analytics code kunye nenombolo ye-AA ye-akhawunti yakho, efumaneka kwi-intanethi ngaphandle kweendleko. Inombolo kunye nenombolo ye-akhawunti ingasetyenziselwa ukuvimba isayithi le-spammer. Qinisekisa ukuba idatha yayo ayibhalwanga kwi-akhawunti yabo ye-Google Analytics. I-akhawunti yakho ye-Google Analytics i-akhawunti ye-Google Analytics. I-automation elula ingenza ukuba ivelise inombolo ye-akhawunti ye-analytics kuyo yonke i-akhawunti ye-Google Analytics. Ngaloo ndlela, unokuba nombono wobume obunobunzima bokuhlaselwa. Ingxaki nje ye-Google Analytics njengokuba abanye abantu bathi i-traffic traffic. Okwangoku ndiqhuba i-Webtrends analytics kwiindawo ezimbalwa ze-akhawunti kunye ne-Google Analytics akhawunti. I-Webtrends ayitsho nto malunga nokuthunyelwa kogaxekile kunye ne-traffic fake, ngoko ke isigqibo sam sokuba kukuhlaselwa kwiGoogle Analytics. Ndiyakrokra ukuba benza njalo ukukhohlisa abasebenzisi abangenacala be-Google Analytics ukwenzela ukuba abantu abaninzi nabaninzi bangathengisa kwiikhonkco zabo ezinxulumene.
Ngelishwa, akunakwenzeka ukuwayeka ngokupheleleyo. Njengoko idatha edalwe ingabanjwanga kwiseva yakho, ayikho indlela yokulahla le spammers. Kodwa unako ukususa idatha esuka kwi-Google Analytics, uqinisekise ukuba iifomati zakho zifanisana nokusebenza kwangempela.
Indlela elula yokukhusela abakwa-Russian spammers kunye nezithuthi kwiiprogram zabo zokudlulisa ngokudala izihlunu kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics. Yiya kwicandelo lomlawuli uze uklikhe kwikhetho lokuhlunga. Kufuneka uqinisekise ukuba uye wasebenzisa umboniso "ococekileyo", apho uya kufuneka ungeze izihlungi ezintsha. Yakha ezinye izihlungi uze ungabandakanyi ukuthunyelwa kwetrama kwigama lomninimzi (co.lumb.co). Musa ukulibala ukuqinisekisa isihlunu ngaphambi kokuba ulondoloze utshintsho.
Ndiyathemba ukuba le miyalelo iza kukunceda wena kunye newebhusayithi yakho ngokubanzi. Ukuba usuchaphazelekile kwinani eliphambili logaxekile, kufuneka udibanise neengcali ze-IT kwaye uphendule umba wakho ngokukhawuleza.